Greenwashing, omume ahịa "acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" | Bezzia
Greenwashing, omume ịzụ ahịa "acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ".
Maria onyekwere | 14/05/2022 10:00 | Akụkọ
Ị na-agbanwe àgwà oriri gị maka ndị ga-adigide? Eleghị anya n'ụzọ ị ga-enwe ọtụtụ obi abụọ metụtara eziokwu nke ihe akara nke nke a ma ọ bụ ngwaahịa ahụ na-agbalị ire gị. Na na ọ dịtụ mfe ịbụ onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ụlọ ọrụ anaghị egwuri egwu mgbe niile na nke ha usoro ahia. Ụfọdụ ọmụmụ na-ekwu na ọ bụ naanị 4,8 nke ngwaahịa akọwara dị ka "acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" na-anabata n'ezie na njirimara. Kedu ka esi amata ha ma mee ihe megide greenwashing?
1 Kedu ihe bụ Greenwashing?
1.1 Ihe si na ya pụta
2 Kedu ka esi achọpụta ya?
2.1 Kpọọ akụkọ aghụghọ ndị ahụ
Kedu ihe bụ Greenwashing?
Ka anyị malite na mmalite. Kedu ihe bụ ịsa ahịhịa? Na nkenke, anyị nwere ike ịsị na ọ bụ a omume ahịa ahịa green ekpebiela ịmepụta ihe atụ efu nke ọrụ gburugburu ebe obibi, na-eji ohere nke susceptibility na omume nke ndị mmadụ na-eri nri ma ọ bụ ngwaahịa ndị a.
Okwu nke sitere na English green (green) na ịsacha (ịsacha), abụghị ihe ọhụrụ. Dị ka akwụkwọ bụ Encyclopedia of Corporate Social Responsibility si kwuo, ọ bụ ya onye na-ahụ maka gburugburu ebe obibi bụ Jay Westerveld onye chepụtara okwu a na edemede 1986, wee rụtụ aka na ụlọ ọrụ nkwari akụ.
Amarakwa dị ka ọcha eco, ịsacha ebe obibi ma ọ bụ eco imposture, ịsa ahịhịa duhie ọha, na-emesi ike nzere gburugburu ebe obibi nke ụlọ ọrụ, mmadụ ma ọ bụ ngwaahịa mgbe ndị a adịghị mkpa ma ọ bụ enweghị ntọala.
Omume ọjọọ a nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-amalite taa iji mee ka onyinyo ha dị ọcha ma nweta ndị ahịa nwere ihe ndị dị mkpa na-emetụta ndị na-azụ ahịa, ahịa na, n'ezie, gburugburu ebe obibi.
na-eduga ná njehie nke nghọta n'ime ndị na-azụ ahịa ma jiri ohere nke onye na-azụ ahịa na-achọ ịmepụta omenala gburugburu ebe obibi dị mma.
Ọ bụghị naanị na uru mgbasa ozi anaghị eme, mana na-ebute mmetụta ka ukwuuma ọ bụ site n'ịba ụba oriri.
Ọ na-emerụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ, n'ihi na na-eduga n'asọmpi na-ezighị ezi, ekwekọghị na ọrụ mmekọrịta ụlọ ọrụ.
Kedu ka esi achọpụta ya?
Iji zere ịsacha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ịkwesịrị ịma otu esi amata ya. Kedu atumatu ndị ụlọ ọrụ na-eji ewepụta echiche a maka ọrụ gburugburu ebe obibi ma ọ bụ nkwado? Ịmara ha ga-enyere anyị aka ịṅa ntị nke ọma na ịmụrụ anya banyere ozi ụfọdụ.
Kpachara anya maka "eke", "100% eco" na "bi(o)". Ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ gosipụtara ụdị nkwupụta ndị a ma ghara iso ha na nkọwa zuru ezu, nwee enyo. Mgbe ngwaahịa bụ organic n'ezie, ọ naghị egbu oge ịnye ozi zuru oke na nke doro anya gbasara ihe mejupụtara ya na ụzọ mmepụta ya.
Zenarị asụsụ na-enweghị isi. Usoro ọzọ a na-ahụkarị bụ iwebata okwu ma ọ bụ okwu ndị na-ezo aka na uru na-adigide ma ọ bụ gburugburu ebe obibi ma na-enweghị echiche doro anya ma ọ bụ ntọala.
Ekwela ka agba ghọgbuo gị: Ịrịọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na akara ha bụ ihe a na-ahụkarị na ụlọ ọrụ ndị ahụ chọrọ ime ka ị kwenye mmekọrịta ha na nkwado na nlekọta gburugburu ebe obibi. N'ezie, n'ihi na ngwaahịa na-eji agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ị gaghị eche ugbu a na e nwere aghụghọ, ma na ezughị ezu ịhọrọ ya.
Ọ bụghị maka ịkwado ihe kpatara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. O zughịkwa na ụlọ ọrụ ahụ na-akwado òtù na-alụ ọgụ maka gburugburu ebe obibi iji kwe nkwa na ngwaahịa ma ọ bụ mmepụta ụlọ ọrụ bụ.
Ozugbo a mara atụmatụ ndị bụ isi, ụzọ kachasị mma isi zere ịdaba n'aghụghọ bụ jiri nlezianya gụọ akara ma kesaa ihe mejupụtara ngwaahịa ahụ. Gịnị ma ọ bụrụ na ozi anyị na-achọ adịghị na label? Mgbe ahụ ị nwere ike ịchọ ya na webụsaịtị ha. Na-enyo enyo ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ebe ahụ; enweghị ozi doro anya na nke ziri ezi na-abụkarị ihe na-akpata ịmụrụ anya.
Mgbe ị na-agụ akara, ọ ga-enyere gị aka ịmata nke ahụ asambodo ndị ọzọ etinyeghị aka. Ọ bụghị stampụ niile nwere otu uru; chọọ ndị na-enye nkwa na ọkwa Spanish na European. Anyị ekwuola na Bezzia maka ya asambodo textile ma anyị na-ekwe nkwa ime nke a tupu European Ecolabels ndị ọzọ na-ekwe nkwa mmetụta dị oke na gburugburu ebe obibi.
Asambodo akwa na -adigide ị kwesịrị ịma
Kpọọ akụkọ aghụghọ ndị ahụ
Mgbe ịchọtara hoax, ewepụla ya, kọsa ya! Ị nwere ike ime ya site na netwọk mmekọrịta, n'ime otu ụlọ ọrụ na n'ezie dị ka onye na-azụ ahịa na otu n'ime òtù nchebe ndị ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Greenwashing, omume ịzụ ahịa "acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ".